အစ်မဖြစ်သူကို ချစ်လွန်းသဖြင့် လက်မထပ်ဘဲ မသန်စွမ်းအစ်မကို နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဂရုစိုက်ပေးခဲ့တဲ့ အဖွားအို | BurmeseAsia
Home News အစ်မဖြစ်သူကို ချစ်လွန်းသဖြင့် လက်မထပ်ဘဲ မသန်စွမ်းအစ်မကို နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဂရုစိုက်ပေးခဲ့တဲ့ အဖွားအို
အစ်မဖြစ်သူကို ချစ်လွန်းသဖြင့် လက်မထပ်ဘဲ မသန်စွမ်းအစ်မကို နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဂရုစိုက်ပေးခဲ့တဲ့ အဖွားအို
အသက် ၈၉ နှစ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ M r Che ဟာ သူ့ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ Ng u က ၉၃ နှစ်ရှိပြီးလို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။နှစ်ဦးစလုံးက လက်ရှိတွင် သူတို့ရဲ့ အသက် ၅၉ နှစ်အရွယ် Nguyen T r u ng Luc အမည်ရှိ တူလေး နဲ့အတူနေထိုင်နေပါတယ် ။Mr. Luc ရဲ့ အဆိုအရ Mr. Ng u နဲ့ Mr. Che တို့က အကျင့်ကောင်း မိသားစုမှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူတို့အားလုံးက ရွာမှာ အလှတရားဖြင့် ကျော်ကြားကြပါတယ် ။
အံ့သြစရာကောင်းတာက အသက် ၁၇ နှစ်မှာ မစ္စတာ N g u ဟာ ပျားတူအသိုက်ထဲကိုမတော်တဆဝင်တိုက်မိလို့ သူ့ခြေထောက်တွေ မသန်မစွမ်းဖြစ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရခက်လာပါတယ် ။သူ့အစ်မကို ချစ်သောအားဖြင့် Che က အိမ်ထောင်မပြုရန် စိတ်နှလုံးနဲ့ ကတိသစ္စာပြုပြီး သူ့အစ်မကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် အပျိုကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။အနှစ် ၇၀ ကျော်ကြာလာတဲ့အခါ ညီမငယ်က ခြေလှမ်းတဝက်၊ ထမင်းသယ်၊ လယ်လုပ်၊ ထမင်းဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ အလုပ်များကို ဘယ်သောအခါမှ မထားခဲ့ပါ ။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ နှစ်ယောက်စလုံးက အားနည်းတဲ့အတွက် တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ဂရုမစိုက်နိုင်တဲ့အတွက် တူ၊တူမတွေကို အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ် ။
2020 ခုနှစ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အခါ Mr. Che ချော်လဲကျကာ အိပ်ယာပေါ်တင်ခံခဲ့ရပါတယ် ။သည်းမခံနိုင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားလိုက်ရသဖြင့် တူလေးမစ္စတာ Luc က သူ့အဒေါ်နှစ်ယောက်ကို ပြုစုရန် အိမ်သို့ ခေါ်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။အထက်လူကြီးရဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုအတွက် သူက သန့်ရှင်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်း၊ အိပ်ရာနှစ်ခန်းကိုထားခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ညမှာ မစ္စတာ Che က အိပ်မပျော်သဖြင့်ညင်ညင်သာသာညည်းတွားတဲ့အခါမှာ မစ္စတာ N g u က ကုတင်ဘေးသို့ ပြေးသွားကာ ကျောကို နှိပ်နယ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။အဒေါ်နှစ်ယောက်ရဲ့အနီးကပ်ပုံရိပ်ကို ကြည့်ရင်း Mr. Luc လည်း သူ့ခံစားချက်တွေကြောင့် သူ့မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေ ကျလာခဲ့ပါတယ် ။သက်ကြီးရွယ်အိုအဒေါ်နှစ်ယောက်ကို ပြုစုရတဲ့နေ့ရက်များအကြောင်းကို မျှဝေရင်း Mr. Luc က ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ် ။သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာ ကလေးများထက် နားလည်ပြီး ပိုဂရုစိုက်ရမယ်။
အစာစားကမှအစ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ် လို့ Mr. Luc က ဆိုပါတယ် ။ Credit M yatအစ်မဖြစ်သူကို ချစ်လွန်းသဖြင့် လက်မထပ်ဘဲ မသန်စွမ်းအစ်မကို နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဂရုစိုက်ပေးခဲ့တဲ့ အဖွားအိုအသက် ၈၉ နှစ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ M r Che ဟာ သူ့ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ Ng u က ၉၃ နှစ်ရှိပြီးလို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။နှစ်ဦးစလုံးက လက်ရှိတွင် သူတို့ရဲ့ အသက် ၅၉ နှစ်အရွယ် Nguyen T r u ng Luc အမည်ရှိ တူလေး နဲ့အတူနေထိုင်နေပါတယ် ။Mr. Luc ရဲ့ အဆိုအရ Mr. Ng u နဲ့ Mr. Che တို့က အကျင့်ကောင်း မိသားစုမှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူတို့အားလုံးက ရွာမှာ အလှတရားဖြင့် ကျော်ကြားကြပါတယ် ။အံ့သြစရာကောင်းတာက အသက် ၁၇ နှစ်မှာ မစ္စတာ N g u ဟာ ပျားတူအသိုက်ထဲကိုမတော်တဆဝင်တိုက်မိလို့ သူ့ခြေထောက်တွေ မသန်မစွမ်းဖြစ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရခက်လာပါတယ် ။သူ့အစ်မကို ချစ်သောအားဖြင့် Che က အိမ်ထောင်မပြုရန် စိတ်နှလုံးနဲ့ ကတိသစ္စာပြုပြီး သူ့အစ်မကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် အပျိုကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။အနှစ် ၇၀ ကျော်ကြာလာတဲ့အခါ ညီမငယ်က ခြေလှမ်းတဝက်၊ ထမင်းသယ်၊ လယ်လုပ်၊ ထမင်းဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ အလုပ်များကို ဘယ်သောအခါမှ မထားခဲ့ပါ ။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ နှစ်ယောက်စလုံးက အားနည်းတဲ့အတွက် တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ဂရုမစိုက်နိုင်တဲ့အတွက် တူ၊တူမတွေကို အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ် ။2020 ခုနှစ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အခါ Mr. Che ချော်လဲကျကာ အိပ်ယာပေါ်တင်ခံခဲ့ရပါတယ် ။သည်းမခံနိုင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားလိုက်ရသဖြင့် တူလေးမစ္စတာ Luc က သူ့အဒေါ်နှစ်ယောက်ကို ပြုစုရန် အိမ်သို့ ခေါ်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။
အထက်လူကြီးရဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုအတွက် သူက သန့်ရှင်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်း၊ အိပ်ရာနှစ်ခန်းကိုထားခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ညမှာ မစ္စတာ Che က အိပ်မပျော်သဖြင့်ညင်ညင်သာသာညည်းတွားတဲ့အခါမှာ မစ္စတာ N g u က ကုတင်ဘေးသို့ ပြေးသွားကာ ကျောကို နှိပ်နယ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။အဒေါ်နှစ်ယောက်ရဲ့အနီးကပ်ပုံရိပ်ကို ကြည့်ရင်း Mr. Luc လည်း သူ့ခံစားချက်တွေကြောင့် သူ့မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေ ကျလာခဲ့ပါတယ် ။သက်ကြီးရွယ်အိုအဒေါ်နှစ်ယောက်ကို ပြုစုရတဲ့နေ့ရက်များအကြောင်းကို မျှဝေရင်း Mr. Luc က ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ် ။သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာ ကလေးများထက် နားလည်ပြီး ပိုဂရုစိုက်ရမယ်။အစာစားကမှအစ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ် လို့ Mr. Luc က ဆိုပါတယ် ။
Previous article(၇) ရက်သားသမီး အလှူရှင်တွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ပီတ်ိဖြစ်စရာ အလှူလေးတစ်ခုကို ချပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
Next articleတစ်နှစ်အရွယ် သားလေးနဲ့ ‌သေ ကွဲ ကွဲခဲ့ရတဲ့ သဘောကောင်းလွန်းတဲ့ CDM ကျောင်းဆရာမလေး